Kismaayo News » Odayaasha dhaqanka oo cod kooda ku biiriyay xaaladda dalka
Odayaasha dhaqanka oo cod kooda ku biiriyay xaaladda dalka
Kn: Odayaal dhaqameed kii soo xulay baarlamaankii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee markii danbana soo xulay 51kii xubnood ee xildhibaan kasta dooranayay ayaa warsaxaafadeed ay maanta soo saareen ku shaaciyay mawqif kooda ku aadan xaaladda dalka.
Odayaashu waxay taageero u muujiyeen dawladda federaalka ee Farmaajo garwadeenka ka yahay iyo xukuumadda Kheyre, waxayna ku booriyeen dhamaan shacabku inay taageeraan, golayaasha labada aqal iyo hogaanka maamul gobolleedyaduna inay meel inay muujiyaan dabacsanaan keeni karta in xukuumaddu xoogga saarto ka midho dhalinta barnaamijkii xasilinta iyo nabad ku soo dabaalidda dalka.
Sidoo kale waxay beesha caalamka ka dalbeen in dhaqaalaha ay ku caawinayaan Soomaaliya ay halmeel isugu geeyaan oo aysan inba meel marinin. Warsaxaafadeedka Odayaal dhaqameedka ayaa ku soo aadaya xili ay wali dood adag ka dhex socoto madaxda maamul gobolleedyada iyo kuwa dawladda federaalka.
Hadaba hoos ka daalaco warsaxaafadeedka.